Xassan Sheekh oo ka digay in la Siyaasadeeyo Colaada ka Tagan Galkacyo, – Hiiraanxog.net
[ 25/09/2018 ] DAAWO SAWIRO:- Wasiirka waxbarashada XFS oo hogaanka dalladaha waxbarashada kala hadlay Hirgelinta manhajka cusub	Arimaha Bulshada
[ 25/09/2018 ] Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax oo gaaray magaalada Hargeysa	Arimaha Bulshada
[ 25/09/2018 ] Thousands Are Arrested in Ethiopia After Ethnic Violence	English News
[ 25/09/2018 ] Hunt on for Shabaab attackers who fled with gunshot wounds	English News
[ 25/09/2018 ] Garissa residents still struggle to get IDs, says NGO	English News
HomeWararka SoomaaliaXassan Sheekh oo ka digay in la Siyaasadeeyo Colaada ka Tagan Galkacyo,
Madaxweynaha Somalia, Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka digay in la siyaasadeeyo dagaalka magaalada Gaalkacyo ka taagan, isagoo xusay in dowladda Somalia ay dadaal ugu jirto sidii nabad loogu soo dabaali lahaa degmadaas oo ay ku dagaalameen maamullada Galmudug iyo Puntland.
Xassan Sheek Maxamuud ayaa sheegay in dagaalka Gaalkacyo aanu ahayn mid siyaasad ama guul lagu gaarayo, balse uu yahay mid nasiib-darro ah oo dhiig Soomaaliyeed uu ku daatay.
“Waxaan doonayaa inaan ku baaqo inaan la siyaasadeyn colaadda Gaalkacyo ka taagan, dhiig Soomaaliyeed oo daadanayana in la siyaasadeeyo ma ahan wax habboon, dadka dhinac siyaasadda u jiidaya arrinta – waxaan leeyaay ma jirto siyaasad ka dhexeysa Koonfurta iyo Waqooyiga Gaalkacyo, dagaalkoodana ma ahan mid siyaasadeed,” ayuu yiri Xasan Sheekh.
Sidoo kale, Xasan Sheekh ayaa ugu baaqay madaxda Puntland inay qaataan kaalintooda, isla markaana inta dhiman u istaagaan, wuxuuna madaxweynuhu ku baaqay in la ixtiraamo doorka odayaasha dhaqanka.
“Dowladda dhexe doorkeeda waa qaadatay, waxaa ka codsanayaa mas’uuliyiinta Puntland iyo Galmudug inay doorkooda qaataan, inta dhiman waxaa rajeynayaa inay u istaagi doonaan, waa in la ixtiraamaa doorka odayaasha dhaqanka; waxaa is-leeyahay nabad waarta ayaa meeshaas ka imaan karta, aad ayaana ugu rajo weynahay,” ayuu hadalkiisa ku daray Xasan Sheekh.
Madaxweynaha Somalia ayaa sheegay in dhibaatada ka dhacday Gaalkacyo ay aad u xanuujineyso, isla markaana aanay raalli ka ahayn waxyaabihii dhacay, laakiinse ay ka mid tahay nasiib-darooyinka soo wajaho Somalia, isagoo xusay sida ay uga xun tahay dowladda federaalka ay daliil u tahay in madaxdii dalka ugu sareysay ay ka qayb-qaadanayaan xalinta dagaalada iyo nabadeynta labada dhinac.
“Aad ayay dowladdu uga xun tahay colaadda Gaalkacyo, waxaana daliil cad u ah in madaxdii dalka ugu sarreysay qaarkood ay Gaalkacyo joogaan, si c olaadda ay u damiyaan, waxaa kaloo la jooga madaxda maamullada dalka qaarkood; gabi ahaantoodna waxaan ka codsanayaa inay xal raadiyaan oo ay colaadda dhaqso ku joojiyaan,” ayuu hadalkiis ku hadaray madaxweyne Xasan Sheekh.
Ugu dambeyn, hadalka madaxweynaha Somalia ayaa kusoo beegmaya, iyadoo ay socdaan dadaallo xooggan oo labada dhinac lagu dhex-dhexaadinayo, iyadoo ay saxiixeen heshiis ka kooban afar qodob oo lagu soo af-jarayo xiisada dagaal
DAAWO SAWIRADA:Ciidamada Dowlada oo Howlgalo ka Sameeyay Magaalada Muqdisho,
DAAWO SAWIRO:- Madaxweyne Farmaajo oo Koobka degmooyinka gobolka Banaadir gudoonsiiyay Kooxda degmada Waabari
Hiiraan Xog, Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ugu hambalyeeyay xulka degmada Waaberi hanashada Koobka degmooyinka gobolka Banaadir oo sannadkii 2-aad oo xiriir ah ay ku guuleysteen. Madaxweynaha ayaa sidoo kale ku ammaanay [...]
Degmada Waabari oo ku guulesatay Koobki degmooyinka gobolka Banaadir
Hiiraan Xog, Degmada Waaberi ee gobolka Banaadir ayaa ku guuleystay cayaarihii degmooyinka Gobolka Banaadir kadib markii ay 1-0 ku garaaceen dhigooda degmada Shibis. Cayaartan oo la dheeley xilli habeenimo ah sanadkii labaad 27 sano kadib [...]